नेपाल भर्सेस हङकङः नेपालको दोस्रो विकेट पतन, कप्तान खड्का आउट ! [अपडेट] - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल भर्सेस हङकङः नेपालको दोस्रो विकेट पतन, कप्तान खड्का आउट ! [अपडेट]
काठमाडौं, भदौ १९ । नेपालले हङकङसँगको खेलमा खराव शुरुवात गरेको छ । नेपालले ७ ओभरको खेल सकिदा महत्वपूर्ण २ विकेट गुमाइ सकेको छ । कप्तान पारस खड्का र सुवास खकुरेल आउट भएका भइकसकेका छन् ।
सुवास शून्य र पारस १४ रन बनाएर आउट भएका हुन् । मेलसियामा भइरहेको एसिया कप छनोटको आफ्नो पाँचौ खेलमा नेपालले आज टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस यूएईको चौंथो विकेट गुम्यो, कप्तानले लिए विकेट
ट्याग्स: nepal vs. hongkong, Paras khadka